Burma Partnership » Villagers Relocated from Myitsone Dam Area Appeal to Return Home
On March 14, 252 villagers from Tanghpre village submitted an appeal letter to Kachin State Minister and Government administration, requesting to return to their village due to the inhabitability of the relocation areas in Aung Myin Tha village. They also reported the issues they are currently facing relating to the construction of the Myitsone Dam, includingacase in which the District Administrator summoned 22 villagers who returned to their village following the suspension of Myitsone Dam Project. Authorities had previously promised relocated villagers that they could continue living in their villages until the area is finally flooded. Upon summoning the villagers, the District Administrator told them to dismantle their houses with their own means no later than March 17, and that they are prohibited to return to the areas for which compensation had already been given. The District Administrator also asked them to signamemorandum that states they would not live and do any business in Tangphre area and that they understood they would be prosecuted according to exciting law if they disobeyed the order.
Download the letter in Burmese here.
အောင်မြင်သာစံပြကျေးရွာနေ ဒေသခံပြည်သူများသည် မိမိတို့ပြောင်းရွေ့သွားခဲ့သော နေရာများမှာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် မိမိမူရင်းနေရပ် ကျေးရွာများသို့ ပြန်လည်အခြေချနိုင်ရန်နှင့် မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်မှုနှင့် ပက်သတ်၍ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို မတ်လ (၁၄) ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ထံ အသနားခံစာ တင်ပြခဲ့ကြသည်။ မြစ်ဆုံ ဆည်ကြီးကို တည်ဆောက်နေသော်လည်း ရေမဝပ်မချင်းကာလပတ်လုံး လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်ခွင့်ပြုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများ၏ ကတိရှိထားသည့်အလျောက် ဆည်တည်ဆောင်မှုကြောင့် ပြောင်းရွေ့ခဲ့ရသော ရွာသားများအနက် မိမိနေရပ်သို့ ပြန်လာခဲ့သည့် ရွာသား ၂၂ ဦးကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ရုတ်တရက် ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အိမ်ဟောင်းများကိုလည်း မတ်လ (၁၇) ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီး မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖျက်သိမ်းရန်နှင့် နစ်နာကြေးပေးပြီးသား နယ်မြေများသို့ (လုံးဝ) ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တန်ဖဲဒေသတွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်ခြင်း မပြုလုပ်တော့ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီး မလိုက်နာပါက တည်ဆဲဥပဒေ ပုဒ်မအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ရွာသားများမှ နားလည်သိရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့သည်။
Tags: Burmese, Kachin State, Myitsone Dam